“सरिता गिरीको नारिकता र पद रद्द हुनुपर्छ”:-पूर्व जर्नेल बस्न्यात – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/“सरिता गिरीको नारिकता र पद रद्द हुनुपर्छ”:-पूर्व जर्नेल बस्न्यात
जेठ २६- आइतबार सांसद सरिता गिरीले नेपाली सेनाको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल प्रेमसिंह बस्न्यातले आपत्ति जनाएका छन् । सांसद गिरीले निजगढमा विमानस्थलको नाममा नेपाली सेनाको एयरबेस बनाउन लागेको, बाराको पथलैयामा सेनाको ब्यारेक राखेको भन्दै आलोचना गरेकी थिइन् ।
उनले सरकारले बजेटमा सेनाको एयरबेस क्याम्प निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको भन्दै त्यसको जवाफ दिन माग समेत गरेकी थिइन् । सांसद गिरीको सो अभिब्यक्तिपछि नेपाल सरकारले नेपालभित्र जहाँसुकै पनि आफ्नो सेना राख्न पाउने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत उनको आलोचना सुरु भएको छ । पूर्वजर्नेल डा.बस्न्यातको भनाइ जस्ताको जस्तै :सरिता गिरी त्यो मान्छे हुन जसले नेपालको नाम नै फेर्नुपर्छसम्म भनेकी थिइन् । यो निकै ठूलो राष्ट्रघाती कुरा हो । बानेश्वरको अल्फाबिटाको बिल्डिङमा पहिला पनि उनले बोलेको मैले सुनेको छु ।
नेपाली सेनामाथि यिनीहरुको किन यति रिस ? के भारतीय सेना ल्याउनुप¥यो नेपालमा ? यो असाध्यै घातक कुरा हो ।यस्तो कुरा त दुश्मनले मात्रै गर्ने हो । नेपालमा सांसदको एउटा लोगो दिएर माननीय भन्नु नेपालको बेइज्जत मात्र हो ।
यस्तै कुरा बोलेर भारतलाई रिझाएर माओवादीले पनि नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न ग¥यो । एमालेका सत्ताधारीलेपनि नेपालमा भारतीय सेना ल्याएर राजालाई अपहरण गर्नुपर्छ भनेर आफू प्रधानमन्त्री बने । नेपाली कांग्रेसका प्रायः नेताहरुको पनि यस्तै अभिब्यक्ति छ । विशेषगरी सेनाको कुरामा प्रदीप गिरी, विमलेन्द्र निधी, सरिता गिरी कसैको कुरा फरक छैन् । नेपाली सेनाले के चाँही ग¥यो र अहिले यिनीहरुको टाउको दुख्यो ? यो अरु केही हैन भारतको आत्मा बोलेको हो ।